Papa Francis no miantso ny mpitondra eran'izao tontolo izao ho ao Vatican amin'ny 14 amin'ny volana Mey 2020 hanao pact manerantany
Filed in NY SIMULATION, Fikomiana mihintsy, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 September 2019	• 10 Comments
Papa Francis, Jesuit Saint Nicholas tsy misy volombava hazo, solombavambahoaka Jesosy Kristy eto an-tany, dia niantso ny 2 ny mpitondra eran'izao tontolo izao herinandro lasa izay mba ho tonga ao Vatican amin'ny 14 tamin'ny volana Mey 2020 hanao «Pact Global '(fifanarahana manerantany). Misy zavatra roa manan-danja amin'ny fandaharam-potoana ho an'io fihaonana io izay tsy maintsy ho avy rehetra. Ny voalohany dia […]
David Sinclair dia mpampianatra ao amin'ny departemantan'ny fototarazo, Blavatnik Institute ary mpiara-miasa amin'ny Paul F. Glenn Center ho an'ny mekanika biolojika amin'ny Aging ao amin'ny Harvard Medical School. Ao amin'ny fanolorana etsy ambany, izy dia manazava ny fomba ifandraisan'ny fahanterana amin'ny vatan'ny olona indrindra amin'ny fatiantoka ny fampahalalana; mitovy amin'ny […]
Filed in NY SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 30 Jolay 2019	• 14 Comments
Raha mamaky ireo mari-pamantarana rehetra isika amin'izay, dia ho hitantsika fa miova haingana izao tontolo izao ary ny lehilahy 2.0 dia zava-misy ao anatin'izany ary 10 taona. Hiaina ny tany sy ny tontolo 2.0 (sy dikan-teny maro hafa) manodidina ny 2045 isika. Noho izany, ny famantarana ny avana na aiza na aiza misy anao [...]
Nanontaniana aho omaly raha nahita ireo sarimihetsika Rutger Hauer aho. Raha ny filazan'ny mpanoratra dia sary mihetsika mihetsika izy ireo. Voankazo Tiorka satria nanaparitaka ny fady vetaveta ary milamina ihany ilay sarimihetsika hafa. Mbola tsy nahita sarimihetsika roa mihitsy aho, satria manana karazana tsy fihetsehana voajanahary amin'ny hypes aho, saingy mazava ho azy fa fantatro […]
Fotoana izao hialana amin'ny tontolo nofinofy ary manomboka mijery ny tontolo manodidina anao noho izay mendrika. Izany dia hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainanao. Tiako ny manasongadina ity fanoloran-tena nataon'i Richard Thieme (eo ambanin'ny faran'ity lahatsoratra ity), pretra teo aloha izay niova fo [...]
Tamin'ity herinandro ity dia nisy fifanakalozan-kevitra kely nipoitra tao amin'ilay tranonkala momba ny vatana vaovao indray ary ny fanontaniana raha misy izany. Araka ny resadresaka dia misy fanambarana ampy hitan'ny vavolombelona izay mampiseho mazava fa misy ny vatana vaovao indray ao amin'ny vatana hafa. Ny hevitro dia ny tsy firaharahiana ny adihevitra rehefa miditra amin'ny maha-zava-misy ny zava-misy iainantsika [...]
Ankehitriny dia tonga amin'ny famaranana fa maro amin'ireo manodidina antsika no tsy manan'aina ara-bakiteny (jereo ity lahatsoratra ity), mangataka anao aho mba hieritreritra indray momba io fanamarihana io. Tsy midika hoe 'amin'ny fomba fiteny' na 'amin'ny metaphor' aho, tsy midika ara-bakiteny hoe tsy manan-kialofana. "Mandehana ary mihabetsaha" dia fanambarana fanta-daza [...]
Filed in NY SIMULATION	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Jolay 2019	• 13 Comments
Ireo izay namaky ilay lahatsoratra momba ny olona tsy fantatra (NPCs) dia mety hahatakatra ankehitriny fa ny teny hoe "fahatsiarovan-tena" na "fanahy" dia azo ampitahaina amin'ny fifandraisana am-bava eo amin'ny atidoha atidoha miaraka amin'ny avatar amin'ny simulation. Ny avatar ao amin'ny simulation dia, araka ny voalaza, dia mifehy avy any ivelany ary noho izany dia nentanim-panahy. Ao amin'io lahatsoratra io [...]
Sarotra ny maka sary an-tsaina hoe, fa manontany tena ve ianao raha misy olona "manodidina anao" ny olona manodidina anao? Tsy maintsy mijery anao manodidina ny fiainana andavanandro ianao ary indraindray dia mahita olona afaka mahatsapa ny fiaraha-miory, saingy tena tanteraka [...]
Filed in NY SIMULATION	by Martin Vrijland	amin'ny 21 June 2019	• 3 Comments
Talohan'izay dia niresaka momba ny horonan-tsary avy amin'i Roald Boom aho, izay tsy fantatro akory, fa nijery lahatsary YouTube talohan'ny 1x. Ao amin'ny kabary etsy ambany (izay azoko), Roald dia manakaiky ny maha-zava-dehibe ny tsiroko. Manambara izy fa ny hevitr'i Einstein dia 'Tsy afaka mamaha olana amin'ny fomba fisainana mitovy' [...]
Total visits: 15.933.743
Fakafakao op Ny tanora ankehitriny dia maniry ny hameno ny toby fanabeazana indray (gulags) miaraka amin'ireo mpihena ny toetrandro
ZalmInBlik op Ny tanora ankehitriny dia maniry ny hameno ny toby fanabeazana indray (gulags) miaraka amin'ireo mpihena ny toetrandro
ZalmInBlik op Ny coronavirus avy any Chine dia manome ny alibi tonga lafatra amin'ny adidy vaksiny maneran-tany